सांसद गजेन्द्रबहादुर महत किन रोए संसदमा ? - Dalit Online - Dalit Online
११ असार २०७५, सोमबार १२:१२
काठमाडौं – सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले अर्थमन्त्रीले सांसदहरुको अपमान गर्ने काम गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा नै रुनुभएको छ ।
२०७५/७६ का लागि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बिहीबार आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा सांसद महत प्रतिनिधिसभा बैठकमै रुनुभएको हो । समाजवाद उन्मुख नभई सांसद तह लगाउने बजेट सरकारले ल्याएको र अर्थमन्त्रीले सांसदहरुको अपमान गरेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । सांसद महत तत्कालीन नेकपा माअाेवादी केन्द्रबाट जुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कोही मन्त्री भएँ भन्दैमा हामीलाई बाँधेर राख्न पाइन्छ भन्या ? हामीलाई तह लगाउन पाइन्छ ? हामीलाई अपमानित गर्न पाइन्छ ? हामीलाई वडाअध्यक्षको ठाउँ राख्न पाइन्छ भन्या ? कोही मन्त्री हुँदैमा पाइन्छ ? त्यो अधिकार कसैलाई छ ?, चाहिने कुरा गर्नुहोस् न भन्या । चाहिएको छैन हामीलाई ४ करोड ।’ ४ करोडले आफूहरुको असाध्यै अपमान गरेको भन्दै सांसद गजेन्द्रले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहमा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य बसालेर विनियोजन गर्नुपर्ने ? कही मिल्ने कुरा हो ? कसैले सहन्छ ?’
प्रकाशित | ११ असार २०७५, सोमबार १२:१२
मन्त्रीहरुलार्इ सभामुखद्वारा ‘रुलिङ’
प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत भुसाल आजदेखि पदमुक्त